ठेकेदारको चुनावमा घैंटेका पार्टनरदेखि कालो सूचीका व्यापारीसम्म
असोज ०४, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं : नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको ११औं महाधिवेशनमा पहिले झैं यो पटक पनि विवादास्पद ठेकेदारहरु नै हावी हुने भएका छन् ।
असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस निकट मानिएका ५ जना ब्यवसायीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुलाई मिलाउन नसकेको खण्डमा बामगठबन्धनका एक्ला उम्मेदवारको जित सुनिश्चित हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म अध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यो खबर आज बिहिबार प्रकाशित ‘यूनाइटेड पोस्ट’ राष्ट्रिय साप्ताहिक अखबारमा छापिएको छ ।
यसरी घोषणा गर्नेमा बर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ (विशाल एण्ड विराट), पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचन (यूनाईटेड विल्डर्स), रामशरण देउजा, यज्ञध्वज कार्की (स्काई विल्डर्स), रवि सिंह (महादेव खिम्ती) र होमनाथ कोइराला (विकोई विल्डर्स) रहेका छन् ।
जसमध्ये सिंह, कार्की, कोइराला र देउजाले एकैपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।
यज्ञध्वज कार्कीबाहेक सबै ब्यवसायी नेपाली काँगे्रस निकट हुन् । कार्कीलाई नेकपाले अघि सारेको छ । कालोसूचीमा परेका हिराचन विवादास्पद ठेकेदार हुन् ।
त्यसैगरी, प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैटे’का पार्टनर ठेकेदार दीपक गौतमले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ११औं महाधिवेशनमा महासचिव पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
ठेकेदार गौतमको गजुरमुखी कम्पनी निकै विवादास्पद मानिन्छ । गजुरमुखी कम्पनीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाहीको सूचीमा राखेको थियो ।
विगतमा ठेकेदार गौतमले गुण्डा नाइके कुमार घैंटेलाई प्रयोग गरेर टेण्डर हत्याउने गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
गौतमले अर्का साझेदर सन्तोष गौतमलाई पनि ठेक्का हत्याउन प्रयोग गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । स्रोतका अनुसार सन्तोष गौतम संघका पूर्व अध्यक्ष शरद गौचन हत्यामा मुछिएका शकास्पद पात्र हुन् ।
सन्तोष र गौचन हत्याका नाइके समिरमानसिंह बस्नेतबीच पटक–पटक कुराकानी भएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको थियो ।
गौतमको समूहलाई काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी र उनका भाइ जगदिश नरसिंह केसीको संरक्षण रहेको छ । गुण्डा नाइके श्रेष्ठसँगको लेनदेन विवाद चलिरहेका बेला महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले घैंटेलाई इन्काउण्टर गरेको थियो ।
मिलेमतोमा ठेक्का लिनेमात्र नभई गुण्डा, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत मिलाउने उनले ठेक्का हात पार्दै आएको खबर यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
हाल सदस्य पदमा रहेका ठेकेदार गौतमले एकैपटक विना छलफल एउटा क्लबमा पुगेर महासचिवमा उम्मेदवारी दिएपछि महासंघमा आवद्ध अन्य पदाधिकारी भने निकै रुष्ट बनेका छन् ।
उनै ठेकेदार गौतमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को महाअभियानको लागि सरकार पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच बृहत् अन्तरक्रियाको खाँचो रहेको बताउँदै त्यसका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए ।
बाहिर हेर्दा इमान्दार देखिने गौतम ठेक्का कार्टेलिङको सुत्राधार नै हुन् ।
गौतमले नै रेल वे विभागको पहिलो ठेक्का (बर्दीबास खण्ड) कार्टेलिङ गरेर सिमित ब्यवसायीले मात्र ठेक्का दिलाएका थिए । ८ प्याकेजमा लिएको उक्त काम करिब ४ अर्ब बराबरको थियो ।
त्यसैगरी, अहिले पनि इलाम, झापा, जनकपुर, नेपालगञ्ज, विरगञ्ज, विराटनगरका शहरी सडकहरुका काम स–साना प्याकेजमा बनाएर आफूअनुकुल उनले काम लिन सफल भएका ब्यवसायीबीच चर्चा छ ।
नेपाल प्रहरीले ठेकेदारहरुका कारण पनि गुण्डागर्दी बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ठेक्कापट्टामा गुण्डाहरुलाई अनाधिकृत रुपमा गुण्डाहरुलाई प्रवेश गराएकै कारण ब्यवसायी गौचनको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०४, २०७५०८:३१
कुँवरलाई ठेक्का दिंदा क्षेत्रीलाई जग्गा उपहार
अदुअआको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नवीनकुमार घिमिरेविरूद्ध उजुरी परेन
भारतीयको मुठ्ठीमा ५० देखि ९ सय मेगावाटसम्मका आयोजना
जनप्रतिनिधिले किन कुट्छन् कर्मचारी ? जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि कार्यान्वयन कसले गर्ला ?
सात प्रदेशलाई तत्कालका लागि एक अर्ब पाँच करोड
कांग्रेसको विरोधसभा: केन्द्रीय नेता आफूलाई अनुकूल हुने जिल्ला छानेर जान पाउने
एलिजाले पक्रिन् गुण्डाहरू, यी ४ वृत्तका डिएसपीहरूको धन्दाको उजुरी पुग्यो आइजीपीसम्म